Muqdisho oo saaka meel la maro la la’yahay | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho oo saaka meel la maro la la’yahay
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxa saaka Caasimadda Soomaaliya ka da’aya xagaa galay bishii ugu danbaysay ee macasalaamada, waxaana waddoonyinka Muqdisho harqiyay daadad xooggan, maadaama maamulka gobolka Banaadir uu ku fashilmay, hagaajinta dhuumihii dhulka hoostiisa ahaa oo ay mari lahaayeen biyahu.
Jid kasta waxaa jaray biyo xawaare xooggan ku socoda oo khatar galinya nolosha dadka oo dhan, waxayna guryaha ugu galeen qoysas dan yar ah, kadib markii kuwa dhaqaalaha haysta iska difaaceen daadadka.
Roobka Xagaaga (Summer), oo ka mid ah, afarta xilli roobaad ee Soomaalida, ayaa u da’a si teelteel ah, marka loo eego xilliyada kale, hayeeshee, daqiiqadaha uu istaago shacabka Caasimadda, ayay ku adag tahay in ay waddooyinka adeegsadaan, maadaama ay ku qulqulayaa biyo aan la dhex mari karin.
Roobka saaka ka da’ay Muqdisho, ayaa la filayaa inuu ka sii dari doono nadaaafad darrada magaalada, oo goobo ka mid ah ay shacabkii ka guureen, kadib markii ay ka cabsadeen in ay cudurro aan la aqoon ka qaadaan biyo fariisadyada isku badelay bullaacadaha.
Ka hor inta uusan saaka Roobku billaaban Ciidamada Dowladda, gaar ahaan kuwa canshuurta aruuriya ee Gobolka Banaadir, ayaa milkiilayaasha guryaha qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir ku qasbayay in ay tagaan saldhigga ugu dhow, isla-markaana bixiyaan lacag sanadle ah oo laa qaado guryaha Muqdisho.